विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा १४ करोड | गृहपृष्ठ
Home समाचार विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा १४ करोड
विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा १४ करोड
चैत ३०, सल्यान । सल्यानमा यस वर्ष रू. १४ करोड बढीको लागतमा विभिन्न विद्यालयका भौतिक संरचनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । भौतिक संरचना पर्याप्त मात्रामा नहुँदा विद्यार्थीहरुको पढाई प्रभावित भएको जनगुनासो आईरहेका बेला यस वर्ष जिल्लामा रू. १४ करोड ४२ लाख बराबरको लागतमा विभिन्न भौतिक संरचनाहरु निर्माण तथा मर्मतको काम भइरहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सल्यानले जानकारी दिएको छ ।
भौतिक संरचना निर्माणमा गत वर्ष रू. ७ करोड २७ खर्च भएको थियो । कार्यालयका अनुसार यस वर्ष जिल्लाका १ सय ७८ विद्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । यस्तै ४२ विद्यालयमा दुईकोठे भवन, १५ विद्यालयमा चारकोठे भवन, ३० शौचालय र एक सय भवन मर्मत भइरहेका छन् ।
गत वर्ष २४ विद्यालयका दुईकोठे भवन, ७ विद्यालयका चारकोठे भवन, ११ शौचालय निर्माण गरिएको थियो । यस्तै गत वर्ष ५० विद्यालय भवन मर्मत समेत गरिएको थियो । जिल्लामा चार वर्षको अवधिमा ४ सय ४५ विद्यालयमा ५ सय १६ भौतिक संरचना निर्माण भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले बताए । भौतिक संरचना निर्माण भएपछि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउन थालेको उनको भनाइ छ ।